"ဆယ်ကျော်သက် ဦး နှောက်အရှိန်မြင့် Porn နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း" ၏မှတ်တမ်း - သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်တွင် Porn
ဤသည်တင်ပြချက် Explorer အနည်းငယ် မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်က porn ကို အသုံးပြု. တက်ကြီးထွားလာသည့်ဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်၏ဖုံးကွယ်။ အများဆုံးသိသိသာသာဖြစ်ရပ်ဆန်းနှင့်အတူစတင်ဖွင့်ကြစို့တက်ဖေါ်ပြခြင်းအတွက် အချို့သော ဒီနေ့ရဲ့နုပျို၏ ညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများ - PORN-INDUCED ERECTILE DYSFUNCTION
1.လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်က gအများကြီးကွဲပြားခြားနားအပေါ် uys ဖိုရမ်များ၏စောဒကစတင်ခဲ့သည် နာတာရှည်, unexplained Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။
2.အားလုံး မိုးသည်းထန်စွာ porn အသုံးပြုသူများသည်ရှိကြ၏။ အံ့သြစရာကောင်းတာကသူတို့ရဲ့ပြဿနာများ၏အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်ထင်ရှား အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း.
t ကိုဆိုသောကွောငျ့ဟေးယေဘုယျအားဖြင့် အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်းမရှိညစ်ညမ်းစိတ်ကူးယဉ်နှင့်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်လောက်နှစ်လအပြီးတွင်ရပြန်လေ၏။ သူတို့က "reboot လုပ်ပေးပါ။ " ခေါ်
ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 အတွက်urology ပါမောက္ခ Carlo Foresta အီတလီနိုင်ငံတူဖြစ်ရပ်ဆန်းသတိပြုမိသည်။ကြီးမားတဲ့စစ်တမ်း၏ရလဒ်များကိုဖော်ပြတဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့သူကဆိုသည်:
"ဒါဟာ porn ဆိုက်များအောက်ပိုင်းတုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူစတင်သည်။ ထိုအခါအဲဒီမှာလိင်စိတ်အတွက်အထွေထွေတစ်စက်ဖြစ်ပြီး, အဆုံး၌တစ်ဦးစိုက်ထူရဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဖြစ်လာသည်။ "unquote ။
1.ပိုများသောမကြာသေးမီကတစ်ဦး လူကြိုက်များအမေရိကန် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြပွဲ, ဒေါက်တာ Oz -Porn-သွေးဆောင် ED အပေါ် program တစ်ခုကိုပြု၏။
2.Uပါရဂူပညာရှင် Andrew Kramer ကအနီရောင်လည်စည်းနှင့်ယောက်ျားလေးသည် eurbile function သည်တစ်လမျှသာလျှင် porn သို့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
3.သို့သော် အဆိုပါ porn-related ED ဖြစ်ရပ်ဆန်းလျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာရဲ့တိုင်ကြားမှအစောဆုံးယောက်ျားတွေ ...
... ပုံမှန်အားဖြင့်ကွန်ပျူတာ wizards သို့မဟုတ်အိုင်တီအထူးကုခဲ့ကြသည်။
1.သူတို့ကရှေ့ဆက်၏မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းဝယ်ယူခဲ့ ဝန်ထုပ်-ပြီးတော့နှောင့်နှေး uncharacteristic တီထွင် သုတ်ရည်လွှတ်သို့မဟုတ် ED လိင်ကာလအတွင်း။ တချို့ကတောင်မှ Ed ခဲ့သည် porn သုံးနေစဉ်။
2.နီးပါး သူတို့ပြုသမျှ၌ရှိ နှောင်းပိုင်းတွင် 20s or အဟောင်းတွေ။
မကြာခင်မှာပဲကျွန်တော်သတိထားမိတော့တယ် နှစ် porn-သွေးဆောင်နှင့်အတူမျှော်လင့်မထားတဲ့ခေတ်ရေစီးကြောင်း ED:
NUMBER ကို ONE - လူငယ်များ (နှစ်ဆယ်ကျော်အစောပိုင်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက်နှောင်းပိုင်းများ) တစ် ဦး နှင့်အတူပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည် တူညီတဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေ။ လျှင်မြန်စွာသူတို့ဧည့်သည်များ၏အများစုဖွဲ့စည်း ဝဘ်မှယောက်ျား porn-သွေးဆောင်၏ဝေဖန်ခံရဘယ်မှာက်ဘ်ဆိုက်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေ။
NUMBER ကို TWO -2လအတွင်းဒါမှမဟုတ်ဒီထက်လိုအပ်သူဟောင်းများကိုယောက်ျားတွေ, မတူဘဲ, ငယ်ရွယ်ယောက်ျားတွေ recover လုပ်ဖို့လိုအပ် 3-6 လအတွင်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး9လအတွင်းသို့မဟုတ်ရှည် porn-သွေးဆောင် ED ကနေ။
နောက်ထပ်ကွာခြားချက်: Oသူတို့ရဲ့စိုက်ထူပြန်လာတစ်ချိန်က lder ယောက်ျားတွေအများအားဖြင့်လုံးဝအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေဖြစ်ကြသည်။ Young ကယောက်ျားတွေမကြာခဏတိုးတက်မှုကြည့်ဖို့ဆက်လက် - သူတို့ရဲ့စိုက်ထူပြန်လာပင်ပြီးနောက်။
ဒါကတစ်ခုသိသာမေးခွန်းကိုဦးဆောင် - အဘယ်ကြောင့်ယောက်ျားတစ်ယောက်, အသက် 50, အများကြီးပိုမြန်ပြီးပိုခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့ပြော, ထက် recover ပါဘူး,a23 ဟောင်း year-?
အထူးသဖြင့်အသက် ၅၀ ရှိပြီဆိုရင်
1)သုံးပြီးဖူး အများကြီးပိုရှည်အသက် 23 တစ်နှစ်ထက် porn - တစ်ခါတစ်ရံ 30 များအတွက် နှစ်ပေါင်း သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို။
2)ႏွင့္ အဆိုပါ 50 နှစ်အရွယ်အောက်ပိုင်း testosterone ဟော်မုန်းရှိပါတယ်
3)HE ဒီထက် dopamine ရှိပါတယ်။ ဦးနှောက်အင်အားကြီးစိုက်ထူခြင်းနှင့် drives တွေကိုလိင်စိတ်အတွက် Dopamine
4)အဟောင်းများ သွေးကြော။ အော်ဂဲနစ် ED ၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာမလုံလောက်သွေးစီးဆင်းမှုဖြစ်ပါသည်
6)ဒီတစ်ခု ထူးဆန်းပုံပေါ်ပါလိမ့်မယ် - ဒါပေမယ့်အဟောင်းတွေယောက်ျားတွေရံဖန်ရံခါအော်ဂဇင်ဟာသူတို့ရဲ့ reboot ပြုလုပ်စဉ်အတွင်းနိုင် ကမထိုနည်းတူသူတို့ကိုပြန်မသတ်မှတ်ပါဘူး y ကိုများစွာသောoung ယောက်ျားတွေ။
1.ဒီတော့ ... အဘယ်ကြောင့်ယောက်ျားတစ်ယောက်, အသက် 50, အများကြီးပိုမြန်ပြီးပိုခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့ recover သနည်း?
2.ထိုလုလင်သည် ကောင်လေးသည်သူ၏မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်သုံးစွဲ မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းရန်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု wiring - နှင့် အဆိုပါ 50 နှစ်အရွယ် မ.
3.ဒီစဉ်းစားကြည့်ပါ သဘာဝကရလဒ်ကို အလွန်ပျော့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုဦးနှောက်အေးစက်၏ သူ့ဟာသူဒီနေ့ရဲ့ရန် မြန်နှုန်းမြင့် porn ။
4.အခုတော့ဒီတင်ပြချက် ED အကြောင်းကိုတကယ်မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီအကြောင်းဖွင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်။ သို့သော်မကြုံစဖူး ED လုလင်တို့သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအားကောင်းလိင်အခြေအနေနိုငျသောခိုင်ခံ့သောသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။
1.စို့ us ထည့်သွင်းစဉ်းစား ကျွန်တော်တို့၏50 နှစ်အရွယ်, အဘယ်သူသည်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED ကနေမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူရပြန်လေ၏။ အဘယ်အရာကိုသူအားမိမိလိင်စိတ်နိုးထ Wired ခဲ့တာလဲ
2.He နဲ့သူ့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ တစ်ဦးက catalog, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး တီဗီ STAR, သို့မဟုတ်တစ် မဂ္ဂဇင်း - သူတဦးတည်းကိုရှာဖွေနိုင်ပါလျှင်,or အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေဇာတ်လမ်း - သုံးပြီး သူ၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်း။ ဖြစ်နိုင်စရာ ကျောင်းမှာမိန်းကလေးအကြောင်းကိုကူးယဉျ။
1.သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် ၁၂၊ ၁၃၊ ၁၄ - သင်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံခဲ့ဖူးဘူး, အသင်သည်အဘယ်သို့သွားကြသည် အကြောင်းကို fantasize masturbating သည့်အခါ?
2.သင်၌ကြီးပြင်းခဲ့လျှင် 70 ရဲ့ - ဒါကမင်းရဲ့အတန်းထဲမှာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုနမ်းနေတာလား။ မင်းကိုထိတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်လား။ ဖြစ်ကောင်း တက် feeling FARRAH FAWCETT ။ အားလုံးအသက်အရွယ်သင့်လျော်သော -
3.ယနေ့တွင် - တစ်ဦး 13 နှစ် အဟောင်းရဲ့ စိတ်ကူးဉာဏ် အစားထိုးနေသည် ခက်-Core ချောင်း (7 နှိပ်လိုက်ရင်) အရူးပစ္စည်းပစ္စယအမျိုးမျိုးအတွက်စေ့စပ်လူမျိုး၏ဗီဒီယိုများ။
4.မည်သည့်အသက်အရွယ်နှင့်မှမသင့်လျော်ပါ မည်သည့် အသက်အရွယ်။ ထိုသို့၏အနည်းငယ်သာအမှန်တကယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံပုံနဲ့ဆင်တူတယ်။
1.အဲဒီအစားမိမိအလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ wiring ၏ arousal အစစ်အမှန်လူတွေကိုဒီနေ့ရဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုမကြာခဏမျက်နှာပြင်များ၏ရှေ့မှောက်၌တွေ့ရှိရသည်။ သူကမှသူ့ဦးနှောက်ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆားကစ် wiring ဖြစ်ပါတယ် ... ..
3.VOYEURISM - ထက်ပါဝင်မှု
4.စဉ်ဆက်မပြတ်ရှာဖွေနေ - ရှာဖွေနေ - လာမယ့်အရာ, နက်ဖြန်အဘို့
5.MULTIPLE TABS -ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး 10, 20 tabs များ - တစ်ဦး3မိနစ် HD ဗီဒီယိုနှင့်အတူအသီးအသီး
6.Shock & အံ့အားသင့်စရာ - ငါတို့သည်ဘယ်လိုဆယ်ကျော်သက်သိကြ စုစုပေါင်းယောက်ျားလေးများဘာမှ
7.SESSION PERN သို့ Multiple Story - သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုတစ်ခုစီ!
8.FETISHES - of တိုင်းစိတျကူးနဲ့မသိမမြင်နိုင်သောအမျိုးအစား
10 ။ ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အမှားကိုအားကစားများအတွက်သင်တန်းပေးထက်ပိုပါတယ်။ porn အသုံးပြုခြင်းဤယောက်ျားတွေ '' စွမ်းရည်ကိုအစားထိုးနေသည် ကစား အားကစားသူတို့ကယ့်ကိုသင်ယူချင်ကြတယ်။
1.အဆိုပါ အောက်ပါ စြေးထား အဟောင်းနှင့် 23 နှစ်အရွယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 50 တစ်နှစ်အကြားအဓိကသော့ခြားနားချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ - လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်။
2."အခု ၂၅ နှစ်ရှိပြီ ဒါပေမယ့်ငါဟာမြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးအသက် ၁၂ နှစ်ကတည်းကညစ်ညမ်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မရဲ့လိင်မှုအတွေ့အကြုံကအကန့်အသတ်ရှိခဲ့တယ်။ အခု ၅ လကြာဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့။
3.ငါသဘောပေါက် ငါ့လိင်ဆန္ဒတွေဟာကွန်ပျူတာဖန်သားပြင်နဲ့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းဆက်နွယ်နေတဲ့အထိပါပဲ။ …အမျိုးသမီးများ သူတို့ 2-D ကိုဖန်ဆင်းတော်နှင့်ငါ့ဖန်ခွက်မော်နီတာနောက်ကွယ်မှနေကြသည်မဟုတ်လျှင်အကြှနျုပျကိုလှည့်။ " unquote
4.အခုအသက် ၅၀ နဲ့ ၂၃ နှစ်တို့ရဲ့တူညီချက်ကိုပြန်ကြည့်ပါ။
1)ငါပြောခဲ့သကဲ့သို့, dopamine အတွက်အဓိကကစားသမား လိင်စိတ်နဲ့စိုက်ထူ။
2)အဟောင်းနှင့်လုလင်ကောင်လေး, porn-သွေးဆောင် ED နှစ်ဦးစလုံးအတွက် ပုံရသည် ဆက်စပ်သောခံရဖို့ လျှော့ချ DOPAMINE signal ။
3)သည်ရှိရဲ့ ဒီထက် dopamine ဖြန့်ချိခြင်း, နည်းပါးလာ dopamine receptors. ONE ဒီအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ် desensitization ။
4)လျှော့ချ dopamine အချက်ပြခြင်းသို့မဟုတ် desensitization, စွဲကြောင့်ဖြစ်ပွားအများအပြားဟာဦးနှောက်ပြောင်းလဲမှုများတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
1.အဆိုပါ ခရမ်းရောင်လမ်းကြောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ၏ရိုးရှင်းသောရုပ်ပုံ circuit ကိုဆုချ။ Desensitization နှင့်အခြားသောစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်.
2.ဤရှေး ဆားကစ် shared ဖြစ်ပါတယ် အားလုံးနို့တိုက်သတ္တဝါများသည်။
3.အိုင်တီရည်ရွယ်ချက်ရဲ့ ကြောင်းထပ်မံအပြုအမူတွေကိုပြန်လုပ်ပါရန်ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်တွန်းနေသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်သန်မှု သို့မဟုတ်၏ရှင်သန်မှု ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇ - ထိုကဲ့သို့သောအစာစားခြင်းနှင့်သင်တန်း၏ - လိင်။
4.ဒါဟာ dopamine ၏အကူအညီနှင့်အတူဤမ
2.တဲ့အခါသင် လိင်မှုကိစ္စတွင်စိတ်လှုပ်ရှားနေကြသည်၊ အနီရောင်အစက် - ဆုလာဘ်ကွင်းဆက်၏အဓိကအချက်အချာ - မီးထွက်လာသည် DOPAMINE signal အမှ hypothalamus (အပြာစက်)
3.အဆိုပါ hypothalamus ရဲ့ "စိုက်ထူစင်တာများ" အသိပေး streaming များ ကျ ထုတ်လုပ်နှင့်တည်တံ့ခိုင်မြဲတစ်ခုစိုက်ထူ - လိင်တံမှကျောရိုး။
4.ဤတွင်င် အဓိကအချက်: dopamine အချက်ပြသည့်ဖြစ်စေ, အကောင်းစွာပုံမှန်အောက်ဆိုပါက အနီရောင် DOT- ဟုခေါ်သည် နျူကလိယ accumbens or HYPOTHALAMUS - မက်ဆေ့ခ်ျ, အားနည်းသည်။ ဒါစိုက်ထူကြသည်။
သိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူယောက်ျား၏အုပ်စုနှစ်စု:
2.လူတို့သညျ မပါဘဲ မည်သည့်လူသိများရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းမရှိ။
ယောက်ျား၏အုပ်စု မပါဘဲ တစ်ဦးဟုလူသိများအကြောင်းမရှိလျော့နည်းမီးခိုးရောင်ကိစ္စခဲ့ - နည်းပါးလာအာရုံကြောဆက်သွယ်မှုကိုဆိုလိုသည်။
•ဆုခမြယျရေးဗဟိုဌာန - အနီရောင်တွင်
•HYPOTHALAMUS - အပြာအတွက်
ဒီထက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စစ နည်း dopamine အချက်ပြ- ရာ desensitization ဖြစ်ပါသည် - porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအတွက်အဓိကကစားသမား။
1.desensitization အဆိုပါဖြစ်လျှင် သာ အချက် porn-သွေးဆောင် ED အတွက်, အသက်အရွယ်နုပျိုသောယောက်ျားတွေ recover မယ်လို့ တစ်ဖွဲ့လုံးတွေအများကြီး မြန်မြန်အဟောင်းတွေယောက်ျားတွေထက်။
2.ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရကြမည် အခြားအကြောင်းအချက်များ - သဘာဝကျကျမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက် - အခါဦးနှောက်အားလုံးမျိုးပွါးတွေအကြောင်းသင်ယူဖို့ရစေတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ... ဒီတင်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်ဘာလဲဘယ် အမှန် အကြောင်း - ဦး နှောက်၊ ဒါကြောင့် ...
နောက်ကျော ဦး နှောက်မှ - အဆိုပါ s ကို၏ neurobiologyexual အေးစက် Revolver ပတ်ပတ်လည် တစ်ဦးအလွန်အရေးပါ အသေးစိတ်: အတူတကွဝါယာကြိုးအတူတကွပစ်ခတ်ကြောင်းအာရုံကြောဆဲလ်.
ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးဦးနှောက်အဘို့, ဒီပတ်ဝန်းကျင်ထဲမှာဖြစ်စေတဲ့ဘာပဲဖို့ဆုလာဘ် circuit ကိုအတွေ့အကြုံချိတ်ဆက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုဆိုလိုသည်။
ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ၏သက်ရောက်မှု evolutionarily သည်အဘယ်သို့ "မေးရန်ရှိသည်အသစ်ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ-ငါnternet porn-စဉ်အတွင်းဒီ ဝေဖန်ချက် ဝင်းဒိုးကို ဦးနှောက်ဖွံ့ဖြိုးမှု၏? "
ငါ ", ဝေဖန်" ဟုပြောနေသောကြောင့် သုတေသနလုပ်ငန်း is ကြောင်းထုတ်ဖော် s ကိုအခြေအနေမှအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လွယ်ကူပါတယ်ရဲ့ငယ်ရွယ်နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက် exuality ။
ပြီးနောက် ဒီနေ့ရဲ့ငယ်ရွယ် porn အသုံးပြုသူအများအပြား၏အတွေ့အကြုံကိုဤသုတေသနအတည်ပြုနေသည်.
1.ဒီသုတေသနကိုသုံးသပ်ကြည့်ပါ, ဂျင်မ်ထဲမှာပြန်ပြောပြ Pfaus ရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်၏သုံးသပ်ချက်ကို: အဘယ်သူသည်အဘယျသို့အဘယ်မှာရှိသည့်အခါ (နှင့်ဒီတစ်ခါလည်းတောင်မှအဘယ်ကြောင့်)? ဘယ်လိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုကြေး၏အတွေ့အကြုံ "လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Desire, ဦးစားပေးမှုနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ချိတ်ဆက်
2. ငါသည်ဤပဌနာ စမ်းသပ်မှု- "SO ဒီနည်းကို သင်ကအဘယ်သို့ဖြစ်သနည်း "
3.သိပ္ပံပညာရှင်များ တစ်လက်ခံမိတ်ဆက် FEMALE အထီးနှင့်ထို့နောက်တစ်မိနစ်အကြာတွင် YANKED မိမိအလှောင်အိမ်၏သူမ၏ထွက်။
4.လုံလောက်အောင်အထပ်ထပ်နှင့်အတူ, ဒီအေးစက် ငယ်ရွယ်အထီး ပုံမှန်ထက်အများကြီးပိုမြန် ejaculate ရန်။
1.ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ် လျင်မြန်သောသုက်ပြုမူ အခါကမ်ဘာပျေါတှငျလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ပေးထား? သူတို့ကလျင်မြန်စွာသုက်ဖြစ်ဆက်လက်
2.သော့ အမှတ်- လိင်မှုဆိုင်ရာအစောပိုင်း အေးစက်ချိန်မှာတောင်ခွအေနမြေားကျန်ရစ် ပြောင်းလဲသွားတယ်။
3.ဘယ်လိုလဲ ဒီတူညီတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ထိခိုက်စေခဲ့ပါဘူး အတွေ့အကြုံရှိယောက်ျား အဘယ်သူသည် ပုံမှန်အမြန်နှုန်းမှာလိင်သင်ယူ?
4.သေချာတာပေါ့ - သူတို့ဖြစ်လာရန်လေ့လာသင်ယူ လျင်မြန်သောသုက်ဒါပေမဲ့ဒီ ယာယီသာဖြစ်ခဲ့သည်.
5.သူတို့ပြီးတာနဲ့ ခွင့်ပြု မပြတ်မတောက် အမျိုးသမီးမှဝင်ရောက်ခွင့်, အ အတွေ့အကြုံ ယောက်ျား သူတို့ရဲ့ပုံမှန်မိတ်လိုက်အလေ့အထသို့ပြန်သွား၏။
6. ပြူးကြည့်မှာ IF ကွန်ပျူတာဆိုတာမေးခွန်းရဲ့အဖြေပါ။ ဒါဆိုမင်းဒါဘယ်လိုလုပ်သလဲ။ - အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ရှင်းပြကူညီနိုငျ အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်း-သွေးဆောင် ED နှင့်အတူငယ်ရွယ်ယောက်ျားတွေမကြာခဏ recover လုပ်ဖို့ပိုရှည်လိုအပ်ပါတယ်?
7.ဒီနေရာတွင်ကသူ၏အစောပိုင်း 20s အတွက်ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ ...
'Alien' ဆိုတာမိန်းမစစ်စစ်တွေနဲ့လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါငါဘယ်လိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုတာဖော်ပြဖို့ငါသုံးခဲ့တဲ့စကားလုံးပါ။ ဒါဟာငါအတုနှင့်နိုင်ငံခြားခံစားရတယ်။ တူပါတယ် ကျွန်တော့်စိတ်ထဲစဉ်းစားမိသည်က၎င်းကိုရှုပ်ထွေးနေသောမျက်နှာပြင်တစ်ခုရှေ့တွင်ထိုင်ရန်အလွန်အေးစက်သောအခြေအနေကိုကျွန်ုပ်ရရှိသည် ထို ပုံမှန်လိင်အစားအမှန်တကယ်အမှန်တကယ်လိင်ဖြစ်။ Unquote
2.သုတေသီဂျင်မ် Pfaus ဇာတိပကတိအားဖြင့်ပုပ်၏အနံ့နှင့်အတူဖျန်းအမျိုးသမီးကြွက်များ - ဟုချေါသ cadaverine.
3.ပုံမှန်အားဖြင့်ကြွက်များသည်အသားများပျက်စီးခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်သည်။ ဒါဟာပင်င်; ဒါကလေ့လာသင်ယူထားတဲ့အပြုအမူမဟုတ်ဘူး။ သူတို့သူငယ်ချင်းများကိုသေနတ်နဲ့သင်္ဂြိုဟ်မယ် cadaverine.
1.ထို့နောက်သူသည်ဤအနံ့, ဒါပေမယ့်ဆန္ဒရှိ, အမျိုးသမီးထားရှိ လှောင်အိမ်သို့ နှင့် ငယ်ရွယ်, ကညာယောက်ျား
2.သူတို့ရဲ့ dopamine မြင့်တက်နှင့်တကွ, ကညာယောက်ျား အိမ်ထောင်ဖက် နှင့် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ejaculated.
1.ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ထိုလူငယ်အထီးကြွက်နှစ်ဦးစလုံးနှင့်အတူလှောင်အိမ်ထဲမှာထားကြ၏ ပုံမှန်-နမ်း အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသမီး သေမင်းကဲ့သို့အနံ့.
2.အဆိုပါ cadaverineအတူ mated -conditioned ယောက်ျား နှစ်ခုလုံး THE မဟုတ်သည့် STINKY အမျိုးသမီး နှင့် THE STINKY အမျိုးသမီး
1.ဘယ်တော့လဲ အကန့်အသတ်မရှိသော သာမန် အထီးမှအပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်ပေးခဲ့ နှစ်ခုလုံး အမျိုးသမီးအမျိုးအစားများ - သူတို့သေမင်း၏နံသောအမျိုးသမီးမချဉ်းမကပ်လိမ့်မယ်။
1.အဆိုပါအေးစက်ဘယ်လိုနက်ရှိုင်းခဲ့သလဲ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် conditional ဟောင်းအပျိုကညာအတွက်ပြည့်နှက်နေတဲ့သစ်သား Dowel လက်ခံရရှိ cadaverine.
2.သူတို့ကအတူကစားများနှင့် ချိုးဖဲ့ က-ရုံပေါ် Dowel ခဲ့လျှင်သူတို့အလိုတခုတည်းအဖြစ် ထိုးဇါ သူတို့ပုံမှန်ကိုချစ်တစ်ခုခုနှင့်အတူကဲ့သို့သော ခြော့ကလကျ or အင်္ဂါဇာတ်လျှို့ဝှက်ချက်.
3.As သုတေသီ ဂျင်မ် Pfaus ပြောပါတယ် ... ..
1."ဒီတွေ့ရှိချက် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက်သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ paraphilias ကြောင်းလူသားတွေအတွက် ခွန်အား မဟုတ်ရင် "ဆန္ဒရှိအဖြစ်ကိုရိပ်မိပါစေ။ End quote ။
2.Pfaus ပြောနေ ထို စောစော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ fetishes အမျိုးမျိုးတို့ကိုထဲမှာဝါယာကြိုးမှပါဝါရှိပါတယ် - ပစ္စည်းပစ္စယကြောင်းအပါအဝင် ပုံမှန်အားရွံမုန်းပါလိမ့်မယ်
3.ဤသည်ကိုလည်းဘယ်လိုရှင်းပြနိုင် အချို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် အဆုံးသတ်သည် တျရှုပျထှေးသို့မဟုတ် ဒုက္ခရောက်နေ သူတို့မှဆိုးရွားလာခဲ့သည်အဆိုပါ porn အားဖြင့် သူတို့ရဲ့ရှာဖွေရေးအတွက် ပို. ပို. များအတွက် ဆွ။
1.ဤရွေ့ကားလာမယ့်2ယောက်ျားတွေ porn ဖျက်သိမ်းရေးပြီးနောက်နွမ်းသူတို့ရဲ့ fetishes ဖော်ပြနေကြသည် ... ။
2.ပထမဦးစွာ Guy: "ငါသည် masturbating ခံခဲ့ရသောအခါငါလိုက်တယ် porn ကြည့်ရှု- ငါကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာငါ့ကိုရွံရှာစေတဲ့ porn ဦး နှောက်ကအမြဲတမ်းပိုညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုကြည့်တတ်တယ်။ သူတို့ဟာစစ်မှန်တဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေလို့မထင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီအရာတွေတကယ်တမ်းငါ့ရှေ့မှာဖြစ်ခဲ့ရင်ငါအခန်းထဲကထွက်သွားလိမ့်မယ်။ ”
3.“ ငါသွားမှာမဟုတ်ဘူး နောက်ကျော porn မှအစဉ်အဆက်, ငါ၏နောက်ဆုံး relapse ပြီးနောက်, ကအားလုံးကိုလမ်းကိုနောက်ကျောကယ့်ကိုရန် "ပုံမှန်" porn ကနေသွားကြဖို့သာ2ရက်သတ္တပတ်ယူသောကြောင့်,သဘာဝထက်သာလွန်သော porn. End quote
1.ဒုတိယကောင်လေး:ကျွန်မကအမျိုးသမီး ၀ တ်စုံတွေ၊ နှင့် ENFအထက်တန်းကျောင်းငါ၏ဒုတိယနှစ်ကတည်းက။
2.ပျက်စီးတစ်ဦးက အကြောင်းအနည်းငယ်ကြောင့်ဆက်ဆံရေး။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီးသည့်နောက်၊ ယခုတွင်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ထဲဝင်မလာသည့်ရက်သတ္တပတ်များစွာရှိသည်။ end quote
3.တကယ်ပဲယောက်ျားတွေဟာသူတို့ရဲ့၏သေချာမကျမည်အကြောင်းအရ စစ်မှန်တဲ့အရသာ ပြီးနောက်သည်အထိ သူတို့ porn ဖြတ်။
1.နောက်ကွယ်မှကဘာလဲ porn အရသာများဝယ်ယူ? ဒါဟာ ဖြစ်ပုံ လိင်မှုဆိုင်ရာ conditional
2.ဘာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်နောက်ကွယ်ကတွန်းအားဖြစ်သနည်း အားလုံး dopamine မှသက်သေအထောက်အထားအချက်များ
1.ဤစမ်းသပ်မှုကို တကယ်ကို dopamine ၏တန်ခိုးကိုပြသ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက် - သောခုနှစ်တွင် ဗာဂျင် အထီးကြွက် နိုင် be မှအေးစက် တစ်ပိုနှစ်သက် လိင်တူချင်း မိတ်ဖက်။
2.Research ထိုးသွင်း တစ်ဦးမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အတူအထီးကြွက် တူတဲ့ dopamine-- လိင်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတုပပြီးသူ့ကိုလှောင်အိမ်ထဲထည့်လိုက်တယ် အခြားအထီး.
1.အဆိုပါနှစ်ဦးကိုကြွက်ပဲတစ်ရက်-The ကကြာအချိန်အတူတူထွက်ချိတ်ဆွဲ စွန့်ခွာရန်အမူးယစ်ဆေးများအတွက် စနစ်။
2.Research ဤလုပ်ငန်းစဉ်2ပိုပြီးကြိမ်,4ရက်ပေါင်းဆိတ်ကွယ်ရာထပ်ခါတလဲလဲ။
3.ရက်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ ပြန်လည်အေးစက်အထီးခဲ့သည် ရွေးချယ်စရာကမ်းလှမ်းခဲ့သည်.
1.မိမိအမှုစနစ်မရှိမူးယစ်ဆေးနှင့်အတူသူမှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူတစ်လှောင်အိမ်ထဲသို့ဝင် နှစ်ခုလုံး သူ၏ အထီးရဲ့ buddy နှင့်တစ်ဦး လိင်ကလက်ခံအမျိုးသမီး.
2.ခန့်မှန်း အရာကြွက် အများဆုံးအပေါ်သူ့ကိုလှည့်?
3.သူကပိုပြီးတုန့်ပြန်ပြသ ရန် MALE: နောက်ထပ် စိုက်ထူ, နောက်ထပ် လိင်အင်္ဂါစုံစမ်းစစ်ဆေးနှင့် ပင် အမျိုးသမီးကဲ့သို့မြှူဆွယ်တောင်းခံ-အဖြစ်ပုံမှန်အထီး mounting အပြုအမူမှဆန့်ကျင်.
4.အဆိုပါသုတေသနပညာရှင်များက ကပြောသည် ကြွက် ခဲ့ မဟုတ် လိင်တူချစ်သူ, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကအခြားကြွက်ကိုမကြိုးပမ်းဖို့ပဲ။
5.သငျသညျ ဒီအံ့သြစရာကိုရှာဖွေစေခြင်းငှါ,- သို့သော်အချို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအကြောင်း porn ရန်, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုမိုကျယ်သတင်းပို့ မ မဟုတ် မီးခြစ် သူတို့၏ ဝမ်းတွင်းပါဖြစ်သော လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်။
1.ဤရွေ့ကားကိုယူ ဥပမာအားဖြင့်ယောက်ျား ၂ ယောက် -
2.FIRST, GUY- ကျွန်မဦးကျွန်မခြေမ fetish နှင့်အတူရိုးရိုးခဲ့တာစဉ်းစားရန် sed - အခုငါ့ကို disgusts ။ ငါဖြောင့်တယ် နှင့်မိန်းကလေးများမဟုတ်ဘဲခြေကဲ့သို့။ No အခြားမည်သည့်ဦးစားပေးသူမည်သူမဆိုမှပြစ်မှု။
3.ပေ Aသူအပေါငျးတို့ fetishes နှင့်ပစ္စည်းပစ္စယတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲ ... ဝေးသွားတူသောအခြား NYONE ခံစားရ? end quote
1.စက္ကန့် GUY: I ငါ၏အနှောင်းပိုင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်များတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲဖြစ်လာခဲ့သည် -လိင်တူချစ်သူလိင် ငါ့ကိုရန်အလွန်ပုံမှန်နှင့်သဘာဝဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ငါအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဒါဟာစိတ်ဝင်စားကြောင်းဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ငါဖြောင့် porn စိတ်ဝင်စားလာပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကို ပို. ပို. ထဲမှာအကျိုးစီးပွားဆုံးရှုံးတွေ့ရှိခဲ့ အထီးခန္ဓာဗေဒ နှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲ အမျိုးသမီးအင်္ဂါဟုအဘို့အ fetish ။
2."ကျွန်တော် ... ဆုံးဖြတ်ပါသည် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းမှရပ်တန့်ရန် - အချိန်အတော်ကြာပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများအတွက်ကျွန်ုပ်၏ ၀ တ်စုံမရှိတော့ကြောင်းကျွန်ုပ်ပျော်ရွှင်စွာပြောနိုင်ပါပြီ။ လိင်တူမေထုန်ဆိုတာငါ့အတွက်စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ပြန်လာပြီ Quote အဆုံးသတ်ရတတ်ပါတယ်။
3.သူတို့ရဲ့ပင် မြင့်မားသော dopamine ပြည်နယ်တှငျအဘယျအမျိုးအစားပြောင်းလဲနေချိန်တွင် orientation ကိုပြောင်းလဲသွားပေမယ့်စဉ်ဆက်မပြတ်အားဖြည့်မရဖူး porn သူတို့အပျေါမှာလှည့်။
1.2012 ခုနှစ်, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1500 ယောက်ျားတွေတစ်ဦးလူကြိုက်များ Reddit.com site ပေါ်တွင်တစ်ဦးရှည်စစ်တမ်းမှတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
2.သင်မြင်သည့်အတိုင်း, 56% သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ porn အရသာဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည် " ပို. ပို. လွန်ကဲသို့မဟုတ် deviant ။ " 24% ဒီနေဖြင့်နှောင့်အယှက်ကြသည် ဟူ. ၎င်း, 32% ကြဘူး။
3.စိတ်ရောဂါ-Norman Doidge အပေါ်သွားခဲ့ရာကရှင်းပြသည်:
"အကြောင်းအရာ လူနာက်ဘ်ဆိုဒ်များကြောင်း themes များနှင့် script များမိတ်ဆက်အဖြစ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပြောင်းလဲသွားတယ်တွေ့ရှိခဲ့ရာ၏ သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်ပြောင်းလဲ သူတို့ရဲ့အသိပညာမပါဘဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ plasticity အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်ပါသည်, အသစ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပုံရိပ်တွေများအတွက်ဦးနှောက်မြေပုံများအားယခင်ကသူတို့ကိုဆွဲဆောင်ခဲ့သောအရာ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာတိုးတက်လာခဲ့သည်။ "
1.ဤတွင်မြင်ယောင်ရန်ကောင်းတစ်ဦးလမ်းဖွင့် Doidge ရဲ့ မှတ်ချက် -
3.သေချာတာပေါ့၊ ဂျက်စီကာဟာအက္ခရာသင်္ချာမှာချစ်စရာကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ၁၃ နှစ်အရွယ်ကနေ့တိုင်းဂိုဏ်းဂိုဏ်းတွေ၊ မုန့်စိမ်တွေ၊ ခက်ခဲတဲ့အချိန်အထိစောင့်ရှောက်ရပါလိမ့်မယ်။
1.ဤတွင်အဘယ်ကြောင့်ဖွင့်: သူကဖွင့် မဟုတ် ဂျက်စီကာ၏အတှေးအဖို့, ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းမှ masturbating ။ သူ့ဦးနှောက်အဆက်မပြတ်သူတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်သုတ်ရည်လွှတ်အတူဆက်စပ်သည့်လှုံ့ဆော်မှုအားဖြည့်နေပါတယ်။
2.သတိရ အတူတူလောင်ကျွမ်းသောအာရုံကြောဆဲလ်များ - ကန့်ခြင်းရှိမရှိ cadaverine + သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းသို့မဟုတ်အမာခံဗီဒီယိုများ + တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေ။
3.ဤသည်အဝါရောင်မြှားရုံကာတွန်းထက်ပိုမိုသည် ... ။
1.ထို အနီရောင်လိုင်းကြီးထွားလာအာရုံကြောလမ်းကြောင်းများမှာ အားကောင်း နှင့်ပိုပြီး အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သော။ အတူတူပစ်ခတ်သောအခြားစကားလုံးများ, အာရုံကြောဆဲလ်တွေအတွက် ...များမှာ အတူတူ wiring ။
2.ႏွင့္ အဘယ်အရာကိုအတူတူသူတို့ကို Wired ကူညီပေးသည်နှင့်စက်ရုံများသည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ထူးခြားသော မော်လီကျူးကိုခေါ် DeltaFosB
3.ဒါပေမယ့်မလုပ်ခဲ့ဘူး ငါဆိုသည်ကား ကြောင်း dopamine လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်နောက်ကွယ်ကတွန်းအားခဲ့သလဲ
ဒါဟာပါ! Dopamine အပွောငျးအလဲထုတ်လုပ်ရန်အကျိုးကို circuit ကိုများအတွက်ခလုတ်များမှာ DeltaFosBနှင့် DELTAFOSB စုဆောင်းခြင်း ဖြန့်ချိ dopamine ပမာဏကိုမှအချိုးအစားပါ။
ဤပုံဤပုံကိုပြသ DeltaFosB နာတာရှည် overconsumption နှင့်အတူစုပုံနိုင်သည်။ အကြောင်းကိုမူထူးခြားတဲ့ရဲ့အဘယျသို့ DeltaFosBဒါကြောင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကဦးနှောက်ထဲမှာန်းကျင်ဆွဲထားတဲ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
DeltaFosB အဆင့်များမြင့်တက်လာသည်နှင့်အမျှ -
ဒါကြောင့် "က" ချင်မှဦးနှောက် rewires - ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။ ဒါကဖနျတီးနိုငျ မြို့ပတ်ရထားလုပ်ငန်းစဉ် - ၏ ချို့တဲ့ မှဦးဆောင် လုပ်နေတယ် - ဒါကြောင့်အပေါ်ထုတ်လုပ်မှုကိုပိုမို deltafosb ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်း ... နှင့်အရာ dopamine ၏နှင့်ပိုပြီးများပြားလာ
1.ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်ဆိုရင် - DeltaFosB ရဲ့ အလုပ်အကိုင်အကျွန်တော်တို့ကိုရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် သတိရနှင့်ပြန်လုပ်ပါ။
2.ယင်း မက်ဆေ့ခ်ျမှာ - "ဒီလှုပ်ရှားမှုကယ့်ကိုတကယ်အရေးကြီးပါတယ်, သင်အထပ်ထပ်လုပ်သင့်ပါတယ်။ "
3.DeltaFosB , ရှေ့တော်၌အတူတကွ wiring ဖွငျ့ဤစုံအသံ, Emotion, Sensation နှင့် မှတ်ဉာဏ် တစ်ဦးနှင့်အတူဆက်နွယ် ကြီးမားသောဆုလာဘ် ထိုကဲ့သို့သောအထွတ်အထိပ်အဖြစ်, တိုက်နယ် Creating ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗုံးနိုင်ပါတယ် ဆုလာဘ်စင်တာ။
4.activated သောအခါ, ဒီ circuit ကိုလိုချင် - သို့မဟုတ်ပင်တပ်မက်၏ခံစားချက်များကိုဖန်တီးပေးပါတယ်။
1.နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် အချိန်: Dopamine တူ၏ THE အလုပ်သမားများကြီးကြပ် နေကြပါတယ်တဲ့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသင်္ဘောသားအဘို့နှင့်အလုပျသမား DELTAFOSB LIKE.
2.Dopamine ကအမိန့်ပေးသည်မှာ -အတူတူကဤအတွေ့အကြုံများချိတ်ဆက်ပါ"- ဒါပေမယ့် DeltaFosB တည်ဆောက် အဆိုပါအဝေးပြေးလမ်း။
3.ဤတွင်ရဲ့ သော့: Long ကအပြီး DeltaFosB ကွယ်ပျောက်, အ ချို့တဲ့ ဆားကစ် ရှိနေဆဲ, နည်းတူ ဆောက်လုပ်ရေးအမှုထမ်းလာမည့်အလုပ်အကိုင်အဘို့အရွက်ပြီးနောက်လမ်းများရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
4.ဤရွေ့ကားဦးနှောက် အဝေးပြေးလမ်းမကြီးသို့မဟုတ်ဆားကစ် အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအစောပိုင်း အတှေ့အကွုံထိုကဲ့သို့သောအစွမ်းထက်နှင့်ကြာရှည်ခံအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
5.နေရာ အခြားပါဘူး ဒီတူညီတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်?
ဒါဟာနှင့်အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည် အားလုံးစှဲ။ Over-စားသုံးမှုနာတာရှည် မူးယစ်ဆေးသို့မဟုတ်သဘာဝကဆုလာဘ် dopamine ကိုမြင့်မားစွာထိန်းသိမ်းထားသည် - ၎င်းသည်စုဆောင်းခြင်းသို့ ဦး တည်စေသည် DeltaFosBနှင့်မှဦးနှောက်လမ်းကြောင်းဦးနှောက် rewires ဒါကြောင့်တပ်မက်.
1.ဥပမာအားဖြင့် - အရက်သမားပြီးနောက်သမ္မာသတိရှိကြလော့ တစ်ဦးက TRIGGER မတရားသောဖြစ်ပေါ်စေသည်ထားတဲ့အဟောင်းစွဲလမ်းကြောင်း, ကိုသက်ဝင်နှင့် relapses နောက်ကွယ်မှယန္တရားဖြစ်ပါတယ်နိုင်ပါတယ်။
2.အထိခိုက်မခံ ထိုအနက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်နေပြီးစွဲ၏ဆောက်လုပ်ရေးများအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ် လမ်းကြောင်း
1.သင်ဤ 2001 လေ့လာမှုကနေတွေ့နိုင်ပါသည်ကြောင့်ဖြစ်ရဲ့ ခဏလူသိများ ထို DeltaFosB အဆိုပါဖြစ်ပါသည် MASTER ပွောငျးလဲ ဘို့ စှဲမွဲမှု.
2.သို့သော်သိသာသည် DeltaFosB switch ကိုပြု၏ မဟုတ် ကျွန်တော်တို့ကိုပစ္စည်းပစ္စယစွဲ get ကူညီရန်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲ။
အတော်ကြာအဖြစ် နောက်ပိုင်းမှာလေ့လာမှုများ ရှာဖွေတွေ့ရှိ - DeltaFosB ရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ function ကို peruse မှတိရိစ္ဆာန်များကိုတိုက်တွန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ် HIGH FAT - မြင့်မားတဲ့သကြား အစားအစာများနှင့် လိင်မှုဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများ။
ယခု that ကိုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သဘောမျိုးစေသည်။
1.ထို့အပြင်အဘယ်အရာကြောင့် ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သဘောမျိုး အဘို့ဖြစ်၏ an ဆယ်ကျော်သက်မှ လျင်မြန်စွာလိင်အကြောင်းကိုအားလုံးလေ့လာသင်ယူ နှင့် အသေးစိတ်မှတ်မိနေ - ဒါနဲ့သူနိုင်သလား အခွင့်အလမ်းကိုယ်နှိုက်ကတင်ဆက်အခါတိုင်းမိမိအခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။
2.2010 BY, ပြင်းထန် ပိုပြီးလေ့လာမှုများ ကြောင်းအတည်ပြု DeltaFosB ခဲ့ ရေရှည်ဦးနှောက်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ နှင့် အတူပေါ်ပေါက်သောအမူအကျင့်အပြောင်းအလဲများ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်
1.နှင့်ယခုနှစ်အစောပိုင်း - t ကိုမိမိအလေ့လာမှုအတူတူကအားလုံးကိုထား
2.quote: သဘာဝ နှင့် မူးယစ်ဆေးဆုလာဘ် အပေါ်ဆုံမသာ တူညီသောအာရုံကြောလမ်းကြောင်းသူတို့အပေါ်ဆုံ တူညီတဲ့မော်လီကျူးပြုပြီ နှင့်ဖွယ်ရှိ တူညီသောအာရုံကြော ဆဲလ်တွေ... အ ... ဆုလာဘ်နှစ်ခုလုံးအမျိုးအစားများ "လို" သြဇာလွှမ်းမိုးရန်။ " အဆုံးကိုးကား
3.ဒီအစွဲလမ်းသည်မတရားသောဆိုလိုတယ် မူးယစ်ဆေးဝါးများ or လိင်အဘို့, ဒါမှမဟုတ် porn - အားလုံးထိပုတ်ပါတူညီတဲ့ယန္တယားနှင့်ဦးနှောက်လမ်းကြောင်းသို့ - နှင့်အတူ DeltaFosB ဘတ်စ်ကားမောင်း။
4.ဒါဟာအစ ဆိုလိုတာကအမူအကျင့်စွဲတွေရှိနေတယ်ဆိုတာ နှင့် မူးယစ်ဆေးစွဲလမ်းကဲ့သို့တူညီသောအခြေခံယန္တယားနှင့်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲဝေမျှ
1.ဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ကြောင်းဆိုလိုတာ တိကျစွာ တစ်ခုစွဲတူသော? NO အဲဒါမဟုတ်ပါဘူး။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် သဘာဝက ဖြစ်စဉ်ကိုပြုလုပ် အားလုံး မြီးကောင်ပေါက်အတှေ့အကွုံ; စှဲမွဲမှု တစ်ဦးရောဂါဗေဒဖြစ်ပါတယ်။
2.သို့သျောလညျး, DeltaFosB နှစ်ဦးစလုံးမှဘုံဖြစ်ပါတယ်။
3.၎င်းတို့အားညွှန်ကြားချက်များမှာ မှတ်မိ & ကြိုးအပြုအမူတွေကိုပြန်လုပ်ပါ - ကဖွင့်ခြင်းရှိမရှိ တစ်ဦးကစီးကရက်ဒါမှမဟုတ် လိင်ဆက်ဆံ သေမင်းကဲ့သို့အနံ့, ဒါမှမဟုတ်သူတစ်ဦးအမျိုးသမီးနှင့်အတူ THE surfing သငျသညျအကြိုက်ဆုံး fetish porn များအတွက်အင်တာနက်။
1.If တစ်ဦးဆယ်ကျော်သက်စောင့်ကြည့်နေသည် အမြောက်အများ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်ဘယ်မှာစွန့်ခွာဘူး ပယ်နှင့်ညစ်ညမ်းစွဲစတင်? NO ရှိပါတယ် နှစ်ဦးစလုံးဝေစုဘုံဦးနှောက်ယန္တရားများဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရိုးရှင်းတဲ့အဖြေ။
2.သူတို့စွဲသို့ချော်ကျသောအခါသူတို့သိသောကြောင့်အဟောင်းများကိုယောက်ျားတွေမကြာခဏပြောပြနိုင် အဘယ်အရာကို "ပုံမှန်" အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းရောက်မလာမီထိုသူတို့အဘို့ဖြစ်ခဲ့သည်။
3.တစ်ဦး 23 နှစ်အရွယ်သာပုံမှန် porn အသုံးပြုမှုကိုလူသိများပြီဆိုရင် အသက် 12 ကတည်းက သူကလိုင်းဖြတ်ကူးရဲ့ပုံကိုထုတ်တွက်ဆထားဘူး compulsive အသုံးပြုမှုသို့?
4.အခုတော့ခက်ခဲ-Core streaming ဗီဒီယိုများကိုမဆိုအသက်အရွယ်မှမရရှိနိုင်ဖြစ်ကြောင်း, လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်အသစ်တစ်ခုပါရာဒိုင်းထဲသို့ဝင်ခဲ့သည်။
5.သိသာထင်ရှားတဲ့, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း is မဟုတ် လိင်, ဒါပေမယ့်ဆက်ဆက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ built-in dopamine တုံ့ပြန်မှုမြှင့်လုပ်ဆောင် - ထပ်ခါထပ်ခါ
1.ကျော်လွန်. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြောင်းတတ်နိုင်သမျှထူးခြားတဲ့ဂုဏ်သတ္တိရှိပါတယ် dopamine စောင့်ရှောက် တက်လာခြင်း။
2.အသစ်အဆန်း, ရှာဖွေခြင်း နှင့် ရှာကြံ, ပစ္စည်းကြောင်း shock or အံ့အားသင့်စရာများ - အားလုံး dopamine ခြီးမွှော လွတ်လပ်စွာအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ပါ။
3.ဖြစ်ဖြစ်ချင်း DOPAMINE Start drop, သင်နောက်တစ်နေ့ဖို့ကိုနှိပ်ပါ ပုံရိပ်သို့မဟုတ်ဗီဒီယို။ နောက်တဖန် up ပြုလုပ် Jack - သငျသညျမပွုနိုငျ ဤ နှင့် Playboy မဂ္ဂဇင်းသို့မဟုတ် DVD ကိုငှားရမ်း။
4.အချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ဤ High-arousal ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းရန် - ထားတဲ့နည်းလမ်းများ မြင့်မားသော dopamine - နာရီ, တမင်တကာ သုတ်ရည်လွှတ် deferring ။
1.များသော တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းမရှိဘဲ porn ကိုအသုံးပြုဖို့: သူတို့အပေါ်စောင့်ကြည့် လေယာဉ်ပျံမှာ အလုပ်မှာအတွက် စာကြည့်တိုက်, သို့မဟုတ်မိမိတို့၏အပေါ် ကြောငျးမှာစမတ်ဖုန်းသူတို့ 2am မှာအိပ်ပျော်သည်အထိ, ဒါမှမဟုတ်သူတို့ porn ဘို့ညစာနှင့်လှိုင်းအပြီးစတင်ပါ။
2.မသာရှိပါတယ် အ porn ၏အကြောင်းအရာ ညစ်ညမ်းသည့်အချိန်တွင်မဆိုယခုရှိသမျှသောအသက်အရွယ်ရန်, ခပ်သိမ်းကိုသိပါသည်အခမဲ့သုံးစွဲနိုင်သည် - အစဉ်အဆက်ကပိုလွန်ကဲဖြစ်ပြောင်းလဲဒါပို့ဆောင်မှုစနစ်ကရှိပါတယ်။
3.ဘယ်အရှိဆုံးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်တတ်၏ နည်းပညာအစွမ်း လူဦးရေရဲ့အစိတ်အပိုင်း
ကျနော်တို့အကြောင်းပြောမထားတဲ့ဒီမှာကအခန်းတစ်ခုဆင်, ရှိတယ် သေး။ - ယင်း အ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက်.
ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးကဦးနှောက်ဖြစ်ပြီး မဟုတ် ဒီထက်အတှေ့အကွုံနဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူကဦးနှောက်.
အိုင်တီခန္ဓာဗေဒ IS, ဇီဝဓာတုဗေဒနှင့်ကလေးတစ် ဦး ရဲ့ထံမှဇီဝကမ္မကွဲပြားခြားနားသည် or အရွယ်ရောက်ပြီးသူရဲ့ ဦး နှောက်။
ပထမဆုံး တစ်ဦးမညီမမျှဖြစ်ပါသည် အာဏာအကြား အ စိတ်လှုပ်ရှားရှာကြံ ၏အစိတ်အပိုင်းများ စရိုက်တွေဦးနှောက် နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ပိုပြီးဆင်ခြင်တုံတရားဦးနှောက်တဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲခဲ့ကြသည်။
ဒုတိယ an ပေါကျကှဲခွငျး အသစ်က ဦး နှောက်ဆက်သွယ်မှု၏ - နောက်တော်သို့လိုက် လျင်မြန်သောတံစဉ်များကိုနှင့်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း။
1.မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းယာယီ မညီမှခြွငျး ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
2.THE "လိင်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ကျောက် & roll” အပိုင်း ဦးနှောက်၏ Overdrive ၌တည်ရှိ၏ - ရဲ့ ယင်းဆုကြေးတိုက်နယ် ...
3.တစ်ချိန်တည်းမှာနေစဉ် the“ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်” \_ t ဦးနှောက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည် နေဆဲ ဆောက်လုပ်ဆဲ: တကယ်တော့, သူတို့အားတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး သည်အထိပြည့်ပြည့်စုံစုံရင့်ကျက်မရောက်ရှိလိမ့်မည် အကွောငျး အသက်အရွယ် 25 ။
4.ဘယ်လိုလဲ အဆိုပါမ အပျိုပေါက် ဆုလာဘ် circuit ကို အများကြီးထုတ်လုပ် "အားကောင်းလုပ်သာလုပ်" အချက်ပြမှုများ?
1.ပဌမ- ထိုဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက် squirts ထွက်ထားတဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူကဦးနှောက်ထက် ပို. dopamine ။
2.စက္ကန့် - အ ဦး နှောက်ရဲ့ sensitivity ကို dopamine နဲ့ အခြား စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် neurochemicals သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဒါဟာ ထိပ် အသက်အရွယ် 15 ဝန်းကျင်။
3.ပိုပြီး dopamine နှင့်ပိုပြီး dopamine receptors ၏ဤပေါင်းစပ် ပို့ပေး အသစ်အဆန်း-ရှာကြံတိုးတက်မြင့်မားလာ။
4.တကယ်တော့တဦးတည်းလေ့လာမှုဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်တုံ့ပြန်ကြောင်းတွေ့ရှိရ တခုခု အတူစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အဖြစ်ကိုရိပ်မိ နှစ်ခုမှလေးကြိမ် အကျိုးကို-circuitry activation အရွယ်ရောက်ပြီးသူ၏။
5.မသာဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ရှိပါတယ် ပိုပြီး dopamine ထွက်ချပေး နှင့်အခြား ဆုလာဘ် neurochemicals, သူတို့စက်ရုံမှထုတ်လုပ် မြင့်မားအဆင့်ဆင့် DeltaFosB.
6.ကျနော်တို့ပြီးသားမြင်သည်အတိုင်း, DeltaFosB လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက်၏စိတ်နှလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။
7.ONE ရလဒ်ကို ၏အဆင့်မြင့်အဆင့်ဆင့်၏ dopamine နှင့် DeltaFosB မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်ထက်စှဲဖို့ ပို. အားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
1.ဆယ်ကျော်သက်လည်းအားနည်းပြီ ရပ် အချက်ပြမှုများ။ ဦးဆယ်ကျော်သက်အစပျိုးကြောင်း nfortunately, လိင်ဟော်မုန်း စိတ်လှုပ်ရှားစရာမှ sensitivity ကို ဘာမှလုပ်ပေး အရှိန်မြှင့် တိုးတက်မှု အဆိုပါတိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး,
2.အဆိုပါ တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး Control Impulses သတင်းပို့, မသင့်လျော်သောအပြုအမူဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်နှင့် တဦးတည်းရဲ့လုပ်ရပ်များ၏အကျိုးဆက်များအလေးချိန်
3.တစ်ဦးကဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်ဖြစ်ပါတယ် Ferrari ပြိုင်ကားအင်ဂျင်နှင့်အတူတစ်ဦးကကားကို LIKE နှင့် Ford ကား Pinto ဘရိတ် - ကြောင်း၌မြင့်-powered ဆုလာဘ်ဆားကစ်ကနေတိုကျတှနျးထားသည့်လွှမ်းမိုးနိုင်ပါတယ် ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့တိုကျရိုကျပေါ်၌ရှိသောအမြှေး။
4.ဆယ်ကျော်သက်မကြာခဏအပေါ်သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုအခြေခံ စိတ်ခံစားမှုချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့s, နှင့်ဒုက္ခရှိတယ် အကျိုးဆက်များသိ ၏ "ကသွား။ " ၏
တနည်းကား, ဒီမျှမတော်တဆမှုသည် ...
ပါဝါ၏ဤအချိုးမညီမျှမှုတစ်ခုဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။ အားလုံးလူမှုရေးနို့တိုက်သတ္တဝါများ ပြပွဲ တူညီသောသွင်ပြင်လက္ခဏာများမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း:
နှစ်ခုလုံး ကူညီပေးခဲ့သည်တိရိစ္ဆာန်များမှ get fired-AB တက်လိင်အထဲက; နေအိမ်စွန့်ခွာ; စူးစမ်းလေ့လာ အသစ်သောနယ်မြေ; နောက်ဆုံးမှာတော့ ရှာတွေ့ သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုပြင်ပမှာအိမ်ထောင်ဖက်.
ရည်ရွယ်ချက် - က inbreeding တား။
ယနေ့ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်လူသား - တို့ကလှုံ့ဆျော တူညီသောရမ္မက်- သောသူတို့သည်တှေ့ဆုံအန္တရာယ် မျက်နှာမှတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲဘယ်တော့မှ: မော်တော်ဆိုင်ကယ်မြန်ဆန် CARS, အပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါး,ဗီဒီယိုဂိမ်း, Junk အစားအစာ, AND သင်တန်း ...အင်တာနက်က porn ။
1.အဆိုပါ ဒုတိယအဓိက အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်ဦးနှောက်၏အင်္ဂါရပ်တစ်ခုဖြစ်သည် an ၏ပေါက်ကွဲသံ အသစ်ကအာရုံကြော အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းဆက်သွယ်မှု (ဖြစ်ကောင်းလျင်မြန်သောတံစဉ်များကိုနှင့်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သော 50-100 ဘီလီယံ),.
2.ဒါကြောင့်ဦးနှောက်ကစတင်ခဲ့သည် အသက်အရွယ်အပြီးကျုံ့ 11- သို့သော်၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာ ပိုပြီးစနစ်တကျ နှင့် ထိရောက်။
3.ဤဖြစ်စဉ်ကိုခွင့်ပြု သင်ယူဖို့တစ်ဆယ်ကျော်သက် အားလုံးသည်သူ၏အကြောင်းကို ပတ်ဝန်းကျင်, ပြီးတော့အတွက်ဝါယာကြိုး အရေးကြီးသောအသစ်သောအတွေ့အကြုံများနှင့်အမှတ်တရများ - ထိုသုံးပြီး "အတူတကွအတူတကွဝါယာကြိုးမီး" နိယာမ။
1.ဒီပိုကောင်း, t ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဖွဲ့စည်း၏ hink လမ်းကြောင်း သို့မဟုတ် ruts ဦးနှောက်ထဲမှာ။
3.ဤ "ruts" ဖြစ်လာသည် မှတ်ဉာဏ်, ကျွမ်းကျင်မှု, အလေ့အထများ နှင့် တောင်မှ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း၏နည်းလမ်းများ။
4.အဓိကအချက် - သင် များမှာ တစ်သုံးစွဲဖို့ကပိုဖွယ်ရှိ ထူထောင် လမ်းကြောင်း - သင်မလိုချင်ရင်တောင်။ ဖြစ်လာသည် အနည်းဆုံး Resistance ၏မြိုင်
5.ထိပ်တန်း ဆယ်ကျော်သက်-ဦးနှောက်ကျွမ်းကျင်သူ, Jay GIEDD, ဖော်ပြထားတယ် ဤလုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် the“အသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်ပါကဆုံးရှုံး” နိယာမ။
6.quote: "သူတို့ကိုဥ နှင့်အသုံးပြုသောဆက်သွယ်မှုရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်လိမ့်မယ်။ အသုံးမပြုသောဆဲလ်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုများသည်ညှိုးနွမ်းပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး သည်ဂီတ၊ အားကစားသို့မဟုတ်ပညာရှင်များကိုလုပ်နေပါက၎င်းသည်ဆဲလ်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုများဖြစ်ပြီးခက်ခဲသည့်ကြိုးဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့အိပ်ရာပေါ်မှာလဲလျောင်းနေရင်၊ ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားတာတွေ၊ MTV တွေကိုကြည့်တာတွေဖြစ်ခဲ့ရင်သူတို့ဟာရှင်သန်နိုင်မယ့်ဆဲလ်တွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေ…” Unquote
7.NO ရှိပါတယ် သံသယဟာကြောင်း လိင်အဘို့ဆဲလ်များနှင့်ဆက်သွယ်မှုရှင်သန်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းပွင့်လန်းပါလိမ့်မယ်။ မေးခွန်းဖြစ်ပါသည် - ဘာ input ကိုကဤဆားကစ်ပုံဖော်ကြမည်နည်း
1.ရုံသုံးသပ် အလွန်ကြီးကျယ်သော ပတ်ဝန်းကျင်မှာ၏မတူကွဲပြားမှု နှင့်လူ့မြီးကောင်ပေါက်ခေတ်ကာလကျော်ဖို့အဆင်ပြေအောင်ပြီအကောက်ခွန်။
2.ဤသည်အလိုက်အထိုက်နေတတ်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်ခဲ့ တစ်ဦးက FOR ကျယ်ပြန့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏ အခွန်ဌာန နှင့် အလေ့အကျင့် ပါဝင်သော အစစ်အမှန်အိမ်ထောင်ဖက်။
3.ယနေ့ သော်လည်းတစ် 13 နှစ် အဟောင်းရဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလမ်းကြောင်း may be အမာခံ pixels ကိုနှင့်မရောက်မီစဉ်ဆက်မပြတ်အသစ်အဆန်း-ဖြစ်ကောင်းနှစ်ပေါင်းအားဖြင့်ပုံသွင်း သူ၏ ပဌမ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံ, ဒါမှမဟုတ်ပင်မိမိအ ပဌမ နမ်း.
4.ကလစ် နှိပ်. မောက် အစားထိုး ထွက်ခွာ တစ်နွယ် များအတွက်ဆာဗားနားကိုရှာ မြေသြဇာအိမ်ထောင်ဖက်။
5.မိမိအမျက်နှာပြင်လျှက်ရှိကြောင်းလူငယ်တစ်ဦးကောင်လေးနေစဉ် is မ ပိုးပန်းကျွမ်းကျင်မှုယူ သို့မဟုတ်အလားအလာအိမ်ထောင်ဖက်-The အတူအပြန်အလှန် မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ပြောင်းလဲပေးသောအဘို့အလွန်အလုပ်များ.
6.နှင့်သူ၏ဦးနှောက် is မဟုတ် ဝါယာကြိုး ပရောပ, pheromones, ဒါမှမဟုတ်သုံးခုရှုထောင်မိတ်ဖက်ရန်သူ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု သာမန်အချိုးအစား ... ။
7. နိဂုံးချုပ် (ခေတ္တရပ်တန့်ပြီး) - ဂျေးအဖြစ် Phelan, UCLA ရဲ့ဇီဝဗေဒပါမောက္ခ ... ။
နှင့်ပူးတွဲရေးသားသူ mean Gene ကပြောပါတယ် - "အားလုံးအလွန်အကျွံ သောဆုလာဘ် circuitry ၏စိတ်ကြွဆေး များမှာ မဟုတ် ဒါကြောင့်မူလကပြောင်းလဲပေးသောအဘို့အပြုအမူတွေပြဿနာရှိပါတယ်.
LIKE crack နဲ့ KrispyKreme ဒိုးနက်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အခြားပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်ပါသည် မတိုက်ဆိုင်.......
ကျနော်တို့ကျော်အဆင်ပြေအောင်ခဲ့သည်ပေးသောဖို့ကမ္ဘာမှသှဖေညျသှားကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေတ်သစ်ကမ္ဘာ၏ ... အဖြစ်ရပ်ဆန်း ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် အချိန်…။
ဒီနည်းကို သေးကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းများအတွက်တန်ဖိုးထားသည်မဟုတ်။ "UNQUOTE
ကြေးဇူးတငျစကား နားထောင်ခြင်းသည်။ ဒီတင်ပြချက်နောက်ကွယ်မှသိပ္ပံရန်ပုံငွေအပေါ်နိုင်ပါတယ် www.yourbrainonporn.comအဆိုပါတင်ပြချက်သူ့ဟာသူအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။